rightsforburma rightsforburma – CRM
Author: rightsforburma rightsforburma
ကောင်းကင်ယံထက်ဝဲပျံရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုတိုက်ဖျက်သူ အပိုင်း – ၁ ခေါင်းမာသူ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် ဗီယက်နမ် စစ်မြေပြင်တနေရာ __ ခြေလျင်တပ်ခွဲ တခုကို ဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန်စစ်ဗိုလ် တယောက်ဟာ ဗီယက်ကောင်းတွေလက်ချက်နဲ့ သွေးသံရဲရဲဖြစ်နေပါတယ် ။ သူ့ကိုယ်မှာတော့ ဗီယက်ကောင်းတွေပစ်ထဲ့လိုက်တဲ့ အေကေ – ၄၇ ကျည်ဆံ ၄ ခုက ဖောက်ဝင်နေတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဗိုလ်ဟာ နောက်ဆုတ်ဖို့မစဉ်းစားပဲ သူ့တပ်ခွဲနဲ့ ရှေ့တက်ပီး ရန်သူကို ချေမှုန်းဖို့သာ အမိန့်ဆက်ပေးပါတယ် ။ သူ့ရဲ့မိုက်မိုက်ကန်းကန်း အမိန့်နဲ့ တပ်ခွဲဟာရှေ့တိုးပီး ရန်သူကို တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင် ချေမှုန်းပီးချိန်မှ အဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ဟာ စစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းဆေးရုံကို တက်သွားပါတယ် ။ ညာဘက် ပုခုံး လက် တင်ပါး နဲ့ ခြေထောက် ၄ […]
Posted on November 16, 2018 April 9, 2019 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
UNB, Dhaka The United States has laid emphasis on voluntary return of Rohingyas as Myanmar and Bangladesh have agreed to begin repatriation of Rohingya refugees in mid-November. “We continue to call for accountability for those that were responsible, and we would look closely at any plans to ensure that it is in fact voluntary,” Robert […]
Posted on November 3, 2018 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
FOR IMMEDIATE RELEASE October 31, 2018 Burma Not Safe for Returning Rohingyas, Warns USCIRF WASHINGTON, DC — Responding to the recent announcement by the governments of Burma and Bangladesh that repatriation efforts for Rohingya Muslim refugees will begin next month, U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) Vice Chair Kristina Arriaga, who visited Burma last […]
ရ ခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ တရားခံတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင် ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း မရှိဘူးလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးက ဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အာဆာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေလို့ စွပ်စွဲခံရပြီး ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးခံရသူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် အာဆာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လို့ တရားရုံးမှာ ၀န်ခံထွက်ဆိုမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက် ရှိမရှိ ဆိုတဲ့ RFA နဲ့ DVB ရဲ့ စာပေးပို့မေးမြန်းချက်ကို ပြည်နယ် တရားရေးဦးစီးမှူး ဦးတင်မောင်လတ်က ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင် ဟုတ်မဟုတ်ကို တရားရုံးက စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်တာမရှိဘူးလို့ ဖြေကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ […]
Posted on October 22, 2018 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
NAYPYIDAW, Myanmar — They posed as fans of pop stars and national heroes as they flooded Facebook with their hatred. One said Islam wasaglobal threat to Buddhism. Another sharedafalse story about the rape ofaBuddhist woman byaMuslim man. The Facebook posts were not from everyday internet users. Instead, […]
ရခိုင်ပြည်နယ်က ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး အကူအညီပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံလည်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (Asean) ကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခ အကျပ်အတည်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အာဆီယံအသင်းရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်းနဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒုက္ခသည်တွေ လုံခြုံမှုနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ၊ ကိုယ့်သဘောဆန္ဒနဲ့ နေရပ်ပြန်နိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖန်တီးရာမှာ ကူညီကြဖို့လည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက အာဆီယံ ညီလာခံ မိန့်ခွန်းမှာ ဒီနေ့ပဲ ပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ တည်ဆောက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သုံးစွဲမှုတွေ အကြီးအကျယ် လိုအပ်သလို၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာရေး ကိစ္စတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလည်း […]
State Counsellor Aung San Suu Kyi toldareporter in Tokyo on Saturday that she does not know why she said last month that the military response to Rohingya insurgents in Rakhine State “could’ve been handled better”. The Myanmar military’s campaign of rape, murder, and arson, which displaced more than 700,000 Rohingya from the country […]
UNITED NATIONS — Bangladeshi President Sheikh Hasina on Thursday accused Myanmar of failing to honoraverbal commitment to take back Rohingya Muslims who have fledacrackdown she described as tantamount to genocide. Hasina’s remarks at the annual gathering of world leaders at the United Nations came as the U.N. Human Rights Council agreed […]
BRUSSELS (Reuters) – The European Union is considering trade sanctions on Myanmar over the Rohingya crisis, potentially stripping the country of tariff-free access to the world’s largest trading bloc, three EU officials said. The sanctions, under discussion at the European Commission, would include Myanmar’s lucrative textile industry and potentially put at risk thousands of jobs there […]
Posted on October 4, 2018 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
ရိုဟင်ဂျာ အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းရေး အိန္ဒိယအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးဖို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres က သူရဲ့ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရှိနေခြင်းအားဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဖိတ်ခေါ်ရာရောက်နေတယ်လို့လည်း အင်္ဂါနေ့က နယူးဒေလီမှာပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်း ဟောပြောပွဲမှာ Antonio Guterres က သတိပေး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မအင်ကြင်းနိုင်က အပြည့်အစုံကို ဆက်လက်တင်ပြမှာပါ။ အင်္ဂါနေ့က နယူးဒေလီမြို့တော် the India Habitat Center မှာ Global Challenges, Global Solutions ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ဖြေရှင်းမှုခေါင်းစဉ်နဲ့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အိန္ဒိယ လူငယ်ထုနဲ့ တွေ့ဆုံဟောပြောပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးဖို့ အိန္ဒိယကို […]
Posted on October 3, 2018 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
Posted on November 20, 2017 Author swelsone